Dancing With The Stars အစီအစဉ်မှာ (၅)မိနစ်လောက်ရိုင်းမိတာနဲ့ အခုအချိန်ထိပြောလို့မပြီးနိုင်ကြတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ မျိုးကိုကိုစန်း - Myannewsmedia
ယဉျစစလေးနဲ့ မိနျးကလေးဆနျလှနျးလှတဲ့ အသှငျအပွငျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူတဈဦးဖွဈတဲ့ အလှမယျ မြိုးကိုကိုစနျးကတော့ သူမယုံကွညျရာလမျးအတိုငျး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရှဆေ့ကျနတေဲ့ စိတျဓါတျခိုငျမာသူလေးတဈဦးပါ။ Transgander တဈယောာကျဖွဈတဲ့ မြိုးကိုကိုစနျးကတော့ လကျရှိမှာ သူအလိုခငျြဆုံးဘဝကို ရရှိသှားခဲ့သလို သူအဖွဈခငျြဆုံးလမျးကွောငျးပျေါ လြှောကျလှမျးနသေူတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှဈက Dancing With The Stars အစီအစဉျမှာ ပါဝငျခဲ့ဖူးတဲ့ မြိုးကိုကိုစနျးက သူ့ရဲ့ အပွုအမူတဈခုကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုကို ပွငျးပွငျးထနျထနျခံခဲ့ရပွီး ထိုဝဖေနျမှုက ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ ခံနရေဆဲဖွဈတဲ့အကွောငျးကို အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ။
“ဒီကိစ်စတှကေို အစပွနျမဖျောခငျြပမေယျ့ တဈခါတညျးရှငျးအောငျပွောလိုကျပါဦးမယျ။ DWTS မှာ တှဲဖကျပါတနာအပျေါကို မိုကျရိုငျးလို့ဆိုပွီး တျောတျောမြားမြား ဝဖေနျခဲ့ကွဖူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီတုနျးက ဝဖေနျတာကိုလညျးခံခဲ့သလို တှဲဖကျပါတနာအပျေါကိုလညျး အဲ့ကတညျးက လှနျသှားတာရှိရငျ တောငျးပနျပါတယျဆိုပွီး တောငျးပနျပွီးသား ကိုယျ့ရဲ့ အပွုအမူပိုငျးမကောငျးဖွဈခဲ့တဲ့အတှကျကွောငျ့ အဲ့ဒီနောကျပိုငျး အလားတူဖွဈရပျမြိုး မဖွဈအောငျနခေဲ့တယျ ဆငျခွငျခဲ့ပါတယျ။ ”
“ကိုယျမှားခဲ့တဲ့ ကိစ်စမို့ ကြှနျမလုပျတာမဟုတျပါဘူးလို့လညျး မငွငျးခဲ့သလို အဲ့ဒီလိုပုံစံမြိုးထပျမဖွဈအောငျလညျး နခေဲ့တယျလေ။ ဒီလောကျဆိုတျောသငျ့ပွီမဟုတျဘူးလား။ ကိုယျမှားခဲ့တဲ့ အမှားမြိုး ထပျမမှားအောငျနတေယျလေ ဒါကိုမလုံလောကျဘူးလား? Screen ပျေါမှာ ၅ မိနဈလောကျ မိုကျရိုငျးမိတာနဲ့ အပွငျမှာ အဲ့လိုယုတျမယမိုကျရိုငျးနတေဲ့သူမဟုတျပါဘူး။ ဒီလောကျနဲ့ပဲ တျောကွပါတော့ Please” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ရငျဖှငျ့လာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မြိုးကိုကိုစနျးကတော့ Dancing With The Stars အစီအစဉျမှာ တှဲဖကျပါတနာ Hi အပျေါကို ရညျရှယျပွောဆိုတာမြိုးမရှိပဲ ခဏတာစိတျအခနျ့အသငျ့မဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ရိုငျးသလိုအပွုအမူဖွဈသှားခဲ့တာ ပရိသတျကွီးအားလုံးသိပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ယဉ်စစလေးနဲ့ မိန်းကလေးဆန်လွန်းလှတဲ့ အသွင်အပြင်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အလှမယ် မျိုးကိုကိုစန်းကတော့ သူမယုံကြည်ရာလမ်းအတိုင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရှေ့ဆက်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာသူလေးတစ်ဦးပါ။ Transgander တစ်ယောာက်ဖြစ်တဲ့ မျိုးကိုကိုစန်းကတော့ လက်ရှိမှာ သူအလိုချင်ဆုံးဘဝကို ရရှိသွားခဲ့သလို သူအဖြစ်ချင်ဆုံးလမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနေသူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှစ်က Dancing With The Stars အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မျိုးကိုကိုစန်းက သူ့ရဲ့ အပြုအမူတစ်ခုကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရပြီး ထိုဝေဖန်မှုက ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ခံနေရဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“ဒီကိစ္စတွေကို အစပြန်မဖော်ချင်ပေမယ့် တစ်ခါတည်းရှင်းအောင်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်။ DWTS မှာ တွဲဖက်ပါတနာအပေါ်ကို မိုက်ရိုင်းလို့ဆိုပြီး တော်တော်များများ ဝေဖန်ခဲ့ကြဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီတုန်းက ဝေဖန်တာကိုလည်းခံခဲ့သလို တွဲဖက်ပါတနာအပေါ်ကိုလည်း အဲ့ကတည်းက လွန်သွားတာရှိရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီး တောင်းပန်ပြီးသား ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူပိုင်းမကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး မဖြစ်အောင်နေခဲ့တယ် ဆင်ခြင်ခဲ့ပါတယ်။ ”
“ကိုယ်မှားခဲ့တဲ့ ကိစ္စမို့ ကျွန်မလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်း မငြင်းခဲ့သလို အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်လည်း နေခဲ့တယ်လေ။ ဒီလောက်ဆိုတော်သင့်ပြီမဟုတ်ဘူးလား။ ကိုယ်မှားခဲ့တဲ့ အမှားမျိုး ထပ်မမှားအောင်နေတယ်လေ ဒါကိုမလုံလောက်ဘူးလား? Screen ပေါ်မှာ ၅ မိနစ်လောက် မိုက်ရိုင်းမိတာနဲ့ အပြင်မှာ အဲ့လိုယုတ်မယမိုက်ရိုင်းနေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလောက်နဲ့ပဲ တော်ကြပါတော့ Please” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရင်ဖွင့်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးကိုကိုစန်းကတော့ Dancing With The Stars အစီအစဉ်မှာ တွဲဖက်ပါတနာ Hi အပေါ်ကို ရည်ရွယ်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိပဲ ခဏတာစိတ်အခန့်အသင့်မဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ရိုင်းသလိုအပြုအမူဖြစ်သွားခဲ့တာ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous post နိုင်ငံ တကာ က မိန်းကလေးပရိ သတ်တွေ ပိုင်တံခွန်ကို သည်းသည်းလှုပ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ မနာလိုချင်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ် အချို့ကိုချပြလာတဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း
Next post ယွန်းယွန်း ကို မွေးနေ့မှာ Surprise ဖြစ်ပြီး ပျော်စေ ချင်လွန်းလို့ စိတ်ကိုမနည်း ချုပ်တည်းပြီး အသေးစိတ်စီစဉ်ခဲ့ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်